Nanova ny tokony hatao ilay lehilahy - toro-hevitra amin'ny psikology iray
Ny fisedrana dia fitsapana matotra ho an'ny mpivady. Indraindray, noho ny fisintonana iray sy ny fahadisoana iray monja, fianakaviana iray mahazatra sy matanjaka dia rava. Tena olana goavana eo amin'ny tontolontsika io olana io, kanefa mbola tsy afaka misaraka ianareo, na dia sarotra aza ny manao izany. Mba hisorohana ny fanitrihana ao amin'ny tenanao sy ny fahaketrahana maharitra, dia ilaina ny mandinika ireo torohevitra sasany izay hanampy amin'ny famerenana amin'ny laoniny ara-moraly.
Ny torohevitry ny solo-saina dia hiteny aminao izay tokony hatao raha manafintohina anao ny vadinao. Araka ny antontan'isa dia miova ny 80% -n'ny lehilahy ary efa ho ny antsasak'izy io toy ny tsy firaharahan'ny vehivavy. Ny vehivavy dia mijaly mafy ary indraindray tsy afaka manaiky ny havan-tiana intsony. Ny torohevitry ny psikology iray, raha manova anao ny vadinao, tsy manao fihetsika haingana toy ny:
Aza manosihosy ny ranomason-tarehy;
aza miala amin'ny trano;
Aza mifandray amin'ny mpanohitra anao;
Aza manao na inona na inona;
Aza manambana ny vadinao.
Saika ny vehivavy rehetra no manaiky ireo fahadisoana rehetra ireo, satria amin'ny fahatezerana na dia ny tazana mamaivay sy mihetsiketsika indrindra aza dia lasa tigra. Ny tena manan-danja indrindra, dia ny mitahiry ny fahamendrehan'ny olona iray ary tsy manary ny marika. Ny famoràna, ny ady, ny fanajariana ny fifandraisana dia tsy hitondra vokatra tsara, ary manampy amin'ny fahatakarana ny olana amin'ny resaka tokantrano ihany.
Ny fomba fiaina aorian'ny famadihana ny vadiny - toro-hevitra amin'ny psikology
Raha tia ny vadinao ianao ary tapa-kevitra ny hitazona ny fofonao, dia mila fantarinao aloha raha iray ihany ny famadihana ity, na raha mbola mitohy hatrany izany. Ho an'ny tenanao, tsy maintsy manapa-kevitra ianao raha afaka miaina miaraka aminy, fa tsy mahatsiaro ilay olana ary tsy manala baraka ny vadiny. Tena sarotra ny manao izany, nefa maninona raha manandrana izany, satria mahatsapa fa tsy mamorona azy ianao, dia afaka manaparitaka.
Ny torohevitry ny solo-saina momba ny zavatra tokony hatao raha miova ny lehilahy, amin'ny lafiny tsirairay dia tsy mitovy. Maro ireo antony manan-danja amin'izany, ary tsy maintsy dinihina avokoa izy ireo. Raha mamela ny vadinao ianao, dia midika izany fa matoky azy mafy ianao, ary mila mahatakatra izany koa izy. Raha tsy mahazo lesona amin'ny toe-draharaha miaraka amin'ny mpamadika izy, dia avereno indray izany.
Ampiasao ny torohevitry ny psikology iray, azonao atao ny manapa-kevitra ny amin'ny fomba hitranga amin'ny toe-javatra raha miova ny lehilahy. Tokony hatao tsy miankina ny fanapahan-kevitra, saingy tokony ho marina ny fanentanana momba ilay olana. Ary ny tena zava-dehibe dia aza mamaly faty ny vadinao. Afaka manimba tanteraka ny fanambadiana izany. Aza manao hadisoana, ary ny mpivady dia ho tafavoaka velona amin'ny fahadisoana rehetra sy ny tsy fitovian-kevitra.
Fiainana aorian'ny famadihana
Ahoana ny fomba hifehezana ny vadiny ao an-trano?
Toetran'ny toetra mampiavaka
Ny fampakaram-bady dihy voalohany
Fankalazana ny fasika amin'ny fampakaram-bady
Antiphospholipid syndrome - inona no loza ateraky ny aretina sy ny fomba hiadiana amin'izany?
Semolina - tombony sy fahasimbana
Voromahery ho an'ny zazavavy
Inona no nofinofin'ny fanafihana?
Fametahana ho an'ny ankizy
Mihinam-panafody - soritr'aretina
Veracol ho an'ny saka
Ny krizin'ny 3 taona - toro-hevitra amin'ny ray aman-dreny
Fombafomba miompana amin'ny vadiny
Kanseran'ny vozona - soritr'aretina
Heparine - injections
Sakafo avy amin'ny alkaline